Oktoobar 2019 - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Bisha: October 2019
Xarunta Jaamacadda Georgetown ee Caddaaladda Bulshada waxay raadineysaa Agaasimaha Cilmi-baarista iyo Qiimeynta
Agaasimaha Cilmibaarista iyo Qiimeynta wuxuu kormeeraa istiraatiijiyadaha qiimeynta iyo howlaha adeegga CSJ, quusin, iyo barnaamijyada barashada bulshada ku saleysan si loo cabbiro saameynta barnaamijka ee ardayda GU, kaqeybgalayaasha barnaamijka, iyo bulshada. [sii wad akhriska…]
Aqoon-isweydaarsiga Sesame wuxuu raadinayaa Agaasime Sare ee Waxbarashada Caalamiga ah
Aqoon-isweydaarsiga Sesame wuxuu raadinayaa Agaasime Sare oo khibrad u leh Waxbarashada Caalamiga ah. Agaasimaha Sare wuxuu siin doonaa hogaaminta shaqada bulshada ee saameynta bulshada, iyadoo diirada la saarayo dadaallada bani'aadamnimada ee Sesame, taageerida barnaamijyada carruurta iyo daryeelayaasha adduunka. [sii wad akhriska…]
Cunug Walba, Xirmo Qalab Kasta oo Sax ah: xirmo kheyraad si loo baro oo wax looga barto Axdiga Qaramada Midoobay ee Xuquuqda Carruurta
"Cunug Walba, Xuquuq Kasta" waa kheyraad internet ah, oo ay soo diyaariyeen Aqoonyahannada Xuquuqda Aadanaha ee USA (HRE USA), oo loogu talagalay barashada iyo barashada Heshiiska Qaramada Midoobay ee Xuquuqda Carruurta. [sii wad akhriska…]
Midnimo Midaysan ayaa jebisa wareegyada rabshadaha waxayna dhistaa naxariis, bulshooyin caafimaad qaba iyada oo loo marayo waxbarashada nabadda. Agaasimaha Horumarinta wuxuu ka shaqeyn doonaa inuu horumariyo oo uu hirgeliyo sanadle lacag ururin iyo qorshe horumarineed oo lagu taageerayo jihada istiraatiijiga ah iyo miisaaniyadda sanadlaha ah ee ururka. [sii wad akhriska…]
Waxaan ku dhiirrigelinay abaalmarinta Abaalmarinta Nabadda Nobel ee 2019 Abiy Ahmed Ali, oo tusaale u ah qaar badan oo ka mid ah sifooyinka hoggaaminta nabadda ee aan ka dooneyno saraakiisha aan doorannay. Tilmaamtan barashada ah, oo ka socota buugga cusub ee "Barashada Casharrada Nolosha: Tilmaamaha Dhiirrigelinta ah ee Abuurista Nabadda Waqtiyada Dhibaatada," waxay nagu martiqaadeysaa inaan tixgelinno tayada hoggaamiyeyaasha aan sida dhabta ah u dooneyno waxayna nagu casuumayaan inay tixgeliyaan sida aan ugu soo bandhigi karno isla hoggaankan awoodda ardayda. [sii wad akhriska…]
Magacaabista Abaalmarinta Nabadda ee Nobel ayaa ah aqoonsiga waxqabadyada Iskudhafka Iskudhafka ee ku aaddan geeddi-socodka nabadda. Waxaa la abuuray 1970s, dhaqdhaqaaqa wuxuu isku dayay inuu wax ku baro caruurta Katooliga iyo Protestant-ka. [sii wad akhriska…]
Arrinta cusub ee marin-u-helidda ee Dib-u-eegista Waxbarashada & Colaadaha waxay sahmineysaa “Aragtiyaha iyo qaab-dhismeedka fikradeed ee waxbarashada, khilaafaadka iyo nabad-dhisidda.” [sii wad akhriska…]
“Waxbarashadu waa inay kobciso caqliga diidmada iyo iska caabinta rabshadaha noocyadeeda kala duwan. Waa inay kobciso dadka sida caqligalka ah u fahma kuna ogaada – maskaxdooda, qalbiyadooda, iyo jiritaankooda oo dhan – qiimaha aan la beddeli karin ee aadanaha iyo dunida dabiiciga ah. Waxaan aaminsanahay in waxbarashadan oo kale ay xambaarsan tahay halganka aan waqtiga lahayn ee ilbaxnimada aadanaha si loo abuuro waddo aan loo mari karin nabadda. ” - Daisaku Ikeda [sii wad akhriska…]